Nepalistudio » कम्युनिष्टले पहिला संस्कृत सिद्ध्याए, अब संस्कृति र पुरा देश सिद्ध्याउदैछन् कम्युनिष्टले पहिला संस्कृत सिद्ध्याए, अब संस्कृति र पुरा देश सिद्ध्याउदैछन् – Nepalistudio
कम्युनिष्टले पहिला संस्कृत सिद्ध्याए, अब संस्कृति र पुरा देश सिद्ध्याउदैछन्
नेपालमै कुनै समय यस्तो पनि थियो । जुन समयमा नेपालका प्रत्येक विद्यालयहरुमा संस्कृतको ज्ञान दिईन्थ्यो । ‘अईउण् ऋलृक्…’ का शब्दहरुले विद्यार्थीहरु खारिन्थे त शास्त्र पढ्नको लागि मात्रै नभएर स्तरीय नेपाली भाषाको लागि पनि संस्कृतले टेको दिईरहेकै थियो । हाम्रा शास्त्रहरुका कारण हामीले आफ्नो मगजलाई फराकिलो बनाउन पाएका थियौं । हाम्रो व्यवहारलाई सुधार्न पाएका थियौं र हाम्रो संस्कृतिलाई पनि निखार्न अवसर पाएका थियौं ।
तर, युरोपियन युनियनको डिजाईन अनुसार नै नेपालको संस्कृति सिध्याउनको लागि सबैभन्दा पहिले संस्कृत सिध्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता भित्रियो नेपालमा । डलरमा बिकेका केही बुज्रुकहरुले आफ्नो संस्कृतिलाई भन्दा, आफ्नो परम्परालाई भन्दा पनि विदेशीको पिसावको न्यानोमा रमाएर संस्कृत सिध्याउन आफूले पनि सहयोग गर्ने वचनवद्धता जारी गरे ।
नेपालमा जे जे काम गरिन्छ त्यसमा मुख्य खलपात्र एउटा हुन्छन् त बाहिर देखिने मुकुट भने अर्कैको भेषमा लगाईएको हुन्छ । त्यस्तै भयो नेपालबाट संस्कृत सिध्याउने खेलमा पनि । यसमा बाहिरी मोहडा माओवादी युद्धलाई देखाईयो भने भित्री खेलमा नेपालका कम्युनिष्टहरु परे । माओवादी कालमा संस्कृत पढाउने आचार्यहरुलाई छानीछानी गोली ठोकियो । त्यो गोली मात्रै एक दुई जना आचार्यमा लागेन त्यो सिंगो संस्कृत शिक्षा माथि लाग्यो ।
हामीलाई लाग्ला संस्कृत नहुँदा पनि त के नै विग्रिएको छ र ? हामी त बाँचिरहेका नै छौं हामी त स्वतन्त्र रुपमा हिँडिरहेका नै छौं । तर, संस्कृत सिध्यिएसँगै हामी सिध्यिएका छौं । संस्कृत सिध्यिएसँगै हाम्रो मूल आभूषण सिध्यिएको छ । हामी कुनै समय संस्कृति र सभ्यताले धनी देश भन्ने नेपालीहरु अहिले सभ्यता लोप हुँदै गएको छ । हाम्रा सबै सम्पत्तिहरु संस्कृत रुपी बाकसमा बन्द गरेर राखिएको छ । त्यसलाई संस्कृत भाषाको साँचोले खेल्नुपर्नेमा त्यो साँचो नै भाँचिदिएपछि अब हामीमा के छ ? खोक्रो मान्छेको शरीर छ मासु छ र केवल शरीर जीउने केही पैसा छ ।
किन सिध्याउन खोज्छन् विदेशीहरुले नेपाली संस्कृति
नेपाली संस्कृतिलाई राम्रो प्रचार गरेर देश दुनियाँमा पुर्याउन सक्ने हो भने नेपालका कोही पनि नागरिक आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी निकायमा नै छ । तर त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन । उदाहरणको लागि नेपालमा गुरुङ संस्कृतिको खाना, नाच, भेषभुषा आदिले लोभ्याएका पर्यटकहरुलाई गुरुङ संस्कृतिको सम्पूर्ण परम्परा र उनीहरुको रहन सहन देखाउने हो भने गुरुङ समुदायको त्यो परम्परामा नै झण्डै सात दिनसम्म पर्यटकहरु हराउन सक्छन् । त्यसमा आवद्ध हुने गुरुङ कलाकारहरुसँगै उनीहरु बस्ने होटल व्यवसायी, उनीहरुलाई सबै जानकारी दिने पथप्रदर्शक (गाईड) जस्ता कति पेशाका मानिसहरुले यहाँ सजिलै आम्दानी गर्न सक्छन् ? यस्ता जातिहरु हामीसँग कति छन् ? १ सय २३ वटा छन् । सबै जातिको यसैगरी संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दैजाने हो भने कोही पनि नेपाली खाडीको ५० डिग्रीमा आफ्नो पसिना बगाउनु पर्दैन ।
तर, नेपालीले पसिना नबगाएको, नेपालीले नेपालमा नै बस्ने वातावरण नदिएको कसले हो त ? त्यो बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपालीहरु नेपालमा नै बस्दाखेरी कसलाई बढी नोक्सानी हुन्छ त ? त्यो बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपाली नेपालमै बस्दा अवश्यपनि नेपाल बाहिरकाहरुलाई नै हो समस्या हुने । नेपाल आफैँमा आत्मनिर्भर बन्दा चलखेल गर्न पाईँदैन भन्ने धार्मिक विस्तारवादका पण्डितहरुको सोचका कारण नै नेपालका युवाहरु खाडी जानु परेको हो ।
नेपाली कम्युनिष्टहरुको कनेक्सन
कम्युनिष्ट सिद्धान्त आफैंमा धर्म र संस्कृतिलाई नमान्ने सिद्धान्त हो । तर, नेपालमा त पण्डितहरु नै कम्युनिष्ट बन्न थालिसकेपछि कहाँको संस्कृतिको रक्षा हुनु र कहाँबाट संस्कृतको विकास हुनु ? २०५६ ५७ ताका माओवादी युद्धका कारण भनेर बन्द गरिएको सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य संस्कृत शिक्षाको व्यवस्था किन अन्त्य गरियो भन्ने विषय खोज्नुपर्ने देखिएको छ । माओवादी युद्धका कारण नै यस्तो गरिएको हो भने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि किन यसलाई पुनः सुरु गरिएन । जनै काटिएका पण्डितहरुलाई किन फेरि वैदिक विधिबाट जनै लगाईएन ?
किन भन्दा उनीहरुको खोक्रो सिद्धान्तका कारण । मुलुक सुहाउँदो सिद्धान्त भन्दा पनि डलर सुहाउँदो सिद्धान्तका कारण मुलुकमा संस्कृत सिद्धिएको हो भन्न कसैले डराउनु नपर्ला । अब डलरको चालमा फस्नेहरु अब नेपालको संस्कृति सिध्याउनमा उद्धत छन् । यो भन्दै गर्दा कसैप्रति समर्थन र कसैको पक्षपोषण गरिएको होईन कि जब नेपालमा कम्युनिष्ट सिद्धान्तको विजारोपण भयो । त्यही दिनदेखि नेपाली संस्कृति र सभ्यता धरापमा पर्दै गयो । त्यसैको अन्तिम अस्त्र नेपालमा संस्कृतलाई मारियो । अब यो आजको भोलि हुने परिवर्तन होईन कि केही दशकमा नै संस्कृतिमा यति धनी नेपाल त्यही संस्कृतिमा पुरै पराधीन बन्ने निश्चित छ । यदि कम्युनिष्टहरुको पञ्जाबाट नेपालको संस्कृति जोगाउन सकिएन भने ।
२३ मंसिर २०७४, शनिबार प्रकाशित